Kambodza · Novambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Kambodza · Novambra, 2018
Tantara mikasika ny Kambodza tamin'ny Novambra, 2018
Ireo Fanehoankevitra Manoloana Ny Fisamborana An'i Kem Sokha, Kambodziana Mpikatroka Mafana Fo Ho an'ny Zon'olombelona
Fahalalahàna miteny 28 Novambra 2018
Avy amin'ny Jinja izay maneho hevitra amin'ity tantara nalefan'ny AP ity mikasika ny fisamborana an'i Kem Sokha, avy amin'ny Ivontoerana Kambodziana mikasika ny Zon'olombelona. Manamafy izy io fa nosamborina ihany koa i Yeng Virak, lehiben'ny Ivontoeran'ny Vondrompiarahamonina ho Fanabeazana Araka ny Lalàna.
Myanmar (Birmania) 28 Novambra 2018
Nahandro matsiro manerantany ao anatin'ny bilaogy folo
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Novambra 2018
Efa nanontany tena ve ianao hoe ahoana no andanian'ny miaramila ny fotoan'ny fialantsasatra any Iraka? Ity no andro handraisanao ny tantara, voalohany avy amin'ny Chairbone Stranger, miaramila Amerikana iray nalefa tany amin'ny toerana vovohana any Iraka.
Fanentanana Takio ny Fahalalahana Maneho Hevitra Ao Kambodza
Fahalalahàna miteny 19 Novambra 2018
Tamin'ny Fiandohan'ny Taona, nanakoako ireo asan'ny Governemanta Kambodziana mba hampanginana an'ireo tsikera atao amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana, narahin'ireo fisamborana mpikatroka Mpiaro ny Zon'Olombelona Kem Sokha, Yeng Virak ary Pa Nguon Teang. Ireo fisamborana ireo dia nateraky ny sora-baventy narantiranty noho ny Andro Natokana ho an'ny zon'olombelona natao ny 10 Desambra 2005
Famahanana bilaogy amin'ny fiteny Kambodziana
Mediam-bahoaka 17 Novambra 2018
(Marihina fa tamin'ny volana Septambra 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Masoivohom-panjakana manara-maso ny politikan'ny fifandraisan-davitra ao amin'ny firenena ny NIDA, (Fahefana Fampandrosoana ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao Nasionaly). Mandrisika ny fampiroboroboana sy ny fametrahana ny rindrambaiko Open Source ny politikan'ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao an'ny Governemanta Kambodziana. Ny Tetikasa Khmer Open Source no niara-niasa...
Thailandy 05 Novambra 2018
Vao haingana no niteraka resabe tamin'ny tambajotra ny fandefasana ny vohikala ilovethailand.org. (tsy mandeha intsony ny rohy). Nanambara ny Praiminisitra thailandey Abhisit Vejjajiva fa io vohikala io dia mikendry ny hamerina indray ny endriky ny firenena ary hampitambatra ny firenena ao anatin'ireo fikorontanana tato ho ato. Teraka avy amin'ireo fitakiana tao amin'io vohikala io ny adihevitra mikasika ny " tany verin'i " Thailandy - tany izay tsy iza fa i Kambodza ankehitriny.